Ponds nzalamizi, endlini yokuqala Annunciation we alley eMoscow, eduze metro station "Mayakovskaya", yisikhungo nesokuphumula engapheli nokuzijabulisa - hookah "yinhlama". Lounge imihla ngemihla phakathi kwezingange zalo eziningi izivakashi abafisa ukuya ezweni i-hookah ngaphansi elizolile eziphumulele umculo wangemuva.
Ukuwela embundwini izindawo, izivakashi ngokushesha bangene ekamelweni elincane ngaphakathi okuyinto ikhuphuka ako omuncu-elimnandi umusi Smoky. Leli hholo has zihlalo, imigoqo esiphikisayo ehlukile, ngemuva okuyinto hookah usebenzela ocezwini lwakhe elilandelayo yobuciko Smoky.
izindawo ezahlukene: kukhona ezinye ukuthi kuphela eyenzelwe ezimbili, kanye labo uhlale inkampani enkulu. Amasofa futhi ezihlalweni benziwe ushokoledi amathoni, kanye nezindonga ngaphakathi akhiwe ngezitini, ngakho-ke kubonakala sengathi izivakashi emiphongolweni mlando, okuyinto ngokulambisa iphula ukukhanya sosuku.
Ngaphezu ihholo elikhulu, "Isigaxa" lounge inikeza VIP-ihholo, okuyinto yakhelwe-10 abantu izinkampani. Kulesi ikamelo, izivakashi ubuke movie yaseshashalazini ekhaya nge screen omkhulu noma nje ukulalela umculo zakho ozithandayo.
Ongoti cocktail flue kuyinto okunezinhlobonhlobo ezinhle ugwayi nokunambitheka, iyatholakala ku "Isigaxa" lounge. Ukuze ngokuvamile magic amamiksi asetshenziswa ugwayi brand ezilandelayo: Tangiers ( "Tanju"), Darkside ( "Darkseid"), Argelini ( "Argelini"), Nakhla ( "nahla"), Starbuzz ( "Starbazz"), Vintage ( "Vintage") , Nirvana ( "Nirvana"), Al Fakher ( "Al Faker"), Serbetli ( "Sherbet") futhi Adaliya ( "Adalat"), Afzal ( "Afzal"), Doobacco Gastro ( "Dobakko Gastro") futhi-ke, , Fumari ( "fumaryl").
Ngokuphathelene amadivayisi ukubhema, lapha inzuzo kunikezwa hookah zakudala - Khalil Mamoon ( "Khalil Mamoun"). Futhi ngokuvamile zinqwabelane phezu mashines ukukhiqiza abakhiqizi ezifana: Amy ( "U-Amy"), Kaya ( "Caillou"), i-Temple ( "Ithempeli"). Konke kuncike izintandokazi siqu iklayenti nogwayi, okuyinto efuna khona ukuba ubheme.
Ibha nendawo service
Ngoba ukuzijabulisa izivakashi, "Isigaxa" lounge has arsenal yayo eziningana etafuleni imidlalo, phakathi awo: Checkers, Backgammon, chess, ulwandle impi, Domino, amakhadi senzondo 500, kanye esinakho sidlala amakhadi ezejwayelekile.
abasebenzi Callao siqukethe amakhosi engcono ibhizinisi abamnyama, eholwa Ili Romanova, ngubani umphathi. The guys balungiselela a hookah omangalisayo, ngakho lonke edolobheni ovelele isikhungo "Isigaxa" lounge hookah. Moscow siyijabulele.
Futhi ezingeni elimnandi service izivakashi. Okokuqala, sibonga nobuchwepheshe bale abasebenzi, izivakashi uzothola ukuxuba wenza ngokuvumelana ukunambitheka ngabanye iklayenti ngamunye. Abanolwazi Hookah Ungahlala ngokushesha futhi usize ukuqonda ebanzi ekukhetheni predlagemogo ugwayi, wonke umuntu lapha uyazinaka ngaphandle "Isigaxa" lounge edonsela ezingasho izivakashi njalo.
Lounge ibha kuhlanganisa iziphuzo ezibandayo futhi ezihlukahlukene enkulu itiye. By the way, Hookah njalo ukuba ukhethe uhlobo itiye, ephelele ngenxa yesizathu esisodwa noma kwenye i-hookah.
"Isigaxa" lounge (eMoscow) ilungele bajabule ukuthola izivakashi nsuku zangeSonto kuya ngoMsombuluko - kusuka 13-00 kuya phakathi kwamabili futhi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo - kusuka 13-00 kuya 04-00.
Isu Competitive - uhlelo olunzulu isinyathelo
Institute for the Development of the Internet (Iri): umlando, imigomo, amaphrojekthi
Uqinisekile ukuthi usebenzisa kahle izikhwama zotshwala?
Izizathu kwesicelo kanye nezinhlobo izinhlawulo